Sababahaan ayay raggu u jecelyihiin dumarka waayo aragnimada leh | Raganimo University
Sababahaan ayay raggu u jecelyihiin dumarka waayo aragnimada leh
Raggu xaga niyada waa ka jecelyihiin gabdhaha da'da yar ee bikrada ah balse markii ay timaado xaqiiqada galmada ama nolosha waxay door bidaan dumarka waayo aragnimada leh. Ninkasta da'da dumarka uu jecelyahay waxay ku xirantahay isaga da'diisa.
Waxay taqaanaa raaxada galmada
Dhinaca galmada raggu niyada waa ka jecelyihiin gabadh da' yar oo ciriiriga ah balse ninka isaga laftiisu waayo araga ah sidaa uma jecla gabdhaha bikrada ah ama aadka u da'da yar. Gabadha aan waayo aragnimada u lahayn galmada raaxada galmada waxba kama taqaan. Sida ragga loo qanciyana ma taqaan. Raggu waxay door bidaan haweenka waayo aragnimada leh oo horay u soo maray galmada. Qaasatan gabdhaha bikrada ah ayaa raggu aad ugu dhibtoodaan xaga galmada. Balse waa jiraan rag iska jecel xanuunka iyo cabaadka gabdhaha.
Waxay taqaanaa wada-noolaashaha
Arintaan waa mid iska cad. Dumarka horay u soo maray guurka nolosha wax weyn ayay ka yaqaanaan. Waxay yaqaanaan sida loola dhaqmo ragga. Gabdhaha da'da yar iyaga waxay noqonaysaa in ninku uu nolosha wax ka baro. Inkastoo ragga qaarkood ay sheegaan in ay jecelyihiin gabdhaha yaryar ee aysan waxba u biloownayn balse ninka doonaya in uu dhisto reer isla markaana aan dooneyn in uu macalin ahaato maalin kasta waxa uu door bidayaa gabadha leh waayo-aragnimada nolosha.
Waxay taqaanaa sida ragga loo kasbado
Dumarka waayo aragnimada leh waxay yaqaanaa sida ninka loo kasbado. Waxay yaqaanaan sida la isugu diyaariyo galmada oo xiiso loogu yeelo iyo sida jaceyl xiiso badan loo abuuro. Waxay gabadha waayo aragnimada leh taqaanaa sida loo kiciyo dareenka ragga.
Waxay taqaanaa waxay doonayso
Arintaan waa mid aad u muhiim u ah. Gabdhaha da'da yar ee aan waayo aragnimada lahayn ma yaqaanaan waxa ka maqan. Sidaa darteed ma yaqaanaan waxa ay doonayaan. Waa laga yaabaa in gabadhu ay wiil jeclaato ama xitaa markii la guursado ay galmada doonayso balse wixii intaa ka dambeeya ninka ayaa laga doonayaa in uu hawsha maamulo. Haddii ninku uu yahay laftiisu mid aan waayo aragnimo badan lahayn xaaladu waa adkaanaysaa. Balse dumarka waayo aragnimada leh, iyagu waa yaqaanaan sida ay ugu raaxaysan karaan galmada iyo qeybaha kale ee nolosha.